လွိုင်ကော်မြို့မှာ စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကြား တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်
၀၄ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၂
ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့ ဒေါဥခူရပ်ကွက်မှာ စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ တွေကြား ဒီနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်မှာ တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်ပွဲတွေကြောင့် လွိုင်ကော် မြို့ကနေ ဘေးလွတ်ရာသွားခဲ့ကြသူတချို့ နေရပ်ပြန်လာကြပေမဲ့ ဘေးအန္တရာယ်ထပ်ရှိလာရင် ပြေးဖို့ အသင့်ပြင်ထားကြတယ်လို့ ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်ဘက်မှာလည်း ကျေးရွာတွေ ရှိရာဘက်ကို စစ်တပ်က လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ခြောက်လှန့် ပစ်ခတ်နေတာလို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ ခုလို ကယားပြည်နယ်ဘက်မှာဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေအကြောင်း ရန်ကုန်ကလာတဲ့ သတင်းကို မခွာညိုက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြား အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရှိနေတဲ့ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့က ဒေါဥခူအကျဉ်းထောင်ဘက်မှာ ဒီကနေ့ သောကြာနေ့ မွန်လွဲပိုင်း ၂ နာရီလောက်ကလည်း တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ လက်နက်ကြီးသံ စက်သေနတ်သံ တွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန် အသံကြားနေရတယ်လို့ လွိုင်ကော်မြို့ခံ သံဃာတပါးက မိန့်ကြားပါတယ်။
““ဒေါဥခူဆိုတာ မြို့လယ်ခေါင်နဲ့ မဝေးဘူးလေ။ ဒေါဥခူထောင်ဘက်မှာ အကျဉ်းထောင်ဘက်မှာ တိုက်ပွဲ ဖြစ်နေတယ် အခုလောလောဆယ်။ လက်နက်ကြီးသံတွေရော လက်နက်ငယ်သံတွေရော လက်နက်ကြီးသံကလွဲလို့ ဟိုမှာ တိုက်နေကြတယ်လေ။ အပြန်အလှန်ပစ်နေကြပြီ။ တော်တော် ပြင်းထန်တယ်။ စက်သေနတ်သံတွေရော လက်နက်ငယ်အသံတွေရော RPG သံတွေရော အဲ့ကြောင့် မို့လို့ (ဒေသခံတွေ) အများကြီးမပြန်လာသေးဘူး။ နည်းနည်းပဲ ပြန်လာသေးတယ်။ ဒီမနက်ခင်းဆို ဦးဇင်းသွားတော့ သူတို့ တချို့ကျတော့လည်း ပစ္စည်းတွေ ရသလောက်သယ် ထွက်နေတယ်။ ပြန် လာတယ်ဆိုတာ ဒီဒေါဥခူကွက် (၁) မှာပဲ ပြန်လာမယ်။ အဲ့ဒီထောင်ဘက်နားနီးတဲ့လူ မပြန်လာဘူး။”
ဇန်နဝါရီလက လွိုင်ကော်မြို့မှာဖြစ်တဲ့ ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်း စစ်တပ်က လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှု တွေပါ လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် တမြို့လုံးနီးပါး ဘေးလွတ်ရာတွေကို ထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ အခုတော့ မြို့ တချို့နေရာတွေမှာ တိုက်ပွဲတည်ငြိမ်စပြုလာတာကြောင့် ဒေသခံတချို့ကတော့ နေရပ်ပြန် လာခဲ့ကြ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လုံခြုံရေး စိတ်မချရတဲ့အတွက် လိုအပ်ရင် ဘေးလွတ်ရာကို ပြေးရှောင်ဖို့ အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားကြတယ်လို့ မြို့ခံ သင်္ဃာက မိန့်ပါတယ်။
“လက်နက်ကြီးသံတွေ RPG သံတွေ အဲ့လောက် နောက် လက်နက်ငယ်သံတွေ အဲ့ဒါတော့ ကြား တယ်။ မြို့အစွန့်စွန့်မှာဆိုရင် မနက်ပိုင်း သို့မဟုတ်ရင် ညနေခင်းအဲ့လိုမျိုးတော့ ကြားနေတယ်။ ခပ် များများနေ့တိုင်းလိုလိုပါပဲ။ လွိုင်ကော်မြို့ပေါ်ဆိုရင် ၁၀၀ မှာ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ ပြန်ရောက် နေတယ်။ စိတ်ချလက်ချတော့ နေလို့မရဘူး။ အကုန်လုံး ပြန်လာတဲ့လူဆိုရင် အကုန်လုံးအဆင့်သင့်ပဲ။ ဆိုးတဲ့ကာလဖြစ်ရင် ပြန်ပြေးဖို့ အဆင်သင့်လုပ်ထားကြတာတွေ များတယ်။ နောက်ညနေခင်းဆို မထွက်တော့ဘူးဆိုကတည်းက သူတို့က အရင်စိတ်နဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေလို့မရဘူးဆိုတာလည်း သူတို့သိနေတာ။”
ခုလိုလွိုင်ကော်မြို့မှာ လုံခြုံရေး မတည်ငြိမ်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေသလို ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်ထဲမှာလည်း လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ စစ်တပ်ဘက်က ခြိမ်းခြောက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ လွိုင်ကော်နဲ့ ဒီးမော့ဆိုမြို့ကြားက တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ ၆ မိုင် စံပြကျေးရွာ၊ ဟိုဖိတ်ကျေးရွာတဝိုက် ဒီနေ့ မနက်အစောပိုင်းက စစ်တပ်ဘက်က လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ လှမ်းပစ် ခတ်နေတာလို့ ဒေသခံက ပြောပါတယ်။
“အခြေအနေကတော့ နည်းနည်းဆိုးနေတဲ့ သဘောရှိတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် တိုက်ပွဲရယ်လို့တော့ မဟုတ် ဘူးပေါ့။ သူက လက်နက်ကြီးတွေ ရမ်းတမ်းပြီးတော့ အဲ့လိုမျိုး ပစ်ခတ်လာတာမျိုး ရှိတယ်ဗျ ဟုတ်။ ဒီးမော့ဆိုဖက်မှာက အဓိက အပစ်ခံရတဲ့နေရာ တော်တော်များများ ဒီ ၆ မိုင်ရယ် ဟိုဖိတ်တကျော ပေ့ါနော်။ တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတဲ့ နေရာတွေပေါ့နော်။ အခုလည်း မီးလောင်နေတယ်ပေ့ါနော် အဲဒီဘက်မှာ။ တိုက်ပွဲတော့ မဖြစ်ဘူးဗျ။ ဒါပေမယ့်တော့ လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ အဆက်မပြတ် ထုနေတယ်ပေ့ါနော်။ စောတုန်းကလည်း ရဟက်ယာဉ်တစီးဝဲနေတယ်ပေါ့နော်။ အခုထိတောင်မှ ဝဲနေတုန်းပဲဗျ။”
ကယားပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့ တိုက်ပွဲတွေမှာ စစ်ကောင်စီက လေကြောင်းသုံး ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုတွေ ရှိတာကြောင့် ဒေသခံတွေက။ စစ်ရဟက်ယာဉ်တွေ အမြဲတမ်း ပျံသန်းတာကိုတွေ့နေရပြီး ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်ခံရမှာကို စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြတာပါ။ ဟိုဖိတ်ကျေးရွာဘက်မှာ စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့တွေ တပ်စွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီရွာဘက်မှာ ဒီနေ့ တိုက်ပွဲတွေ မရှိပေမဲ့ စစ်တပ်က ရှာဖွေ ရှင်းလင်းနေတယ်လို့ ဒေသခံက ပြောပြပါတယ်။
“ထိတွေ့တိုက်ပွဲ အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတော့ မရှိဘူးပေါ့နော်။ ရွာထဲမှာ သူတို့က စခန်းချပြီးတော့ နေနေတာတွေရှိတယ်။ အဲ့လိုမျိုး စခန်းချနေနေတာကိုမှ သူတို့က …. လူနေအိမ်တချို့ တွေကို လိုက်မွှေပြီးတော့ ဖျက်စီးတာတွေ၊ ဝင်မွှေတာတွေ… နောက်ပြီးတော့ ပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ ကျွဲ နွား တိရိစ္ဆာန်တွေ၊ အိမ်သုံး၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေလည်း သူတို့က သတ်ဖြတ်ပြီး စားသောက်နေတာမျိုးတွေ တွေ့ရတာပေါ့နော်။”
လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်ခံနေရတဲ့ နေရာတဝိုက်မှာ ဒေသခံတွေ မရှိကြဘဲ အရင်ကတည်းက ဘေးလွတ် ရာကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။ ဒေသအခြေအနေ တည်ငြိမ်ရင် ဒေသခံတွေ ပြန်လာကြပြီး အခြေအနေဆိုးရင် ပြန်ပြေးနေကြရတာပါ။ ကယားပြည်နယ်ထဲက မြို့နယ်တော်တော် များများမှာ ဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေ သိန်းနဲ့ချီရှိနေပါတယ်။ ဘေးလွတ်ရာ ပတ်ဝန်း ကျင် မြို့နယ် ကျေးရွာနဲ့ တောတောင်တွေထဲမှာ ခိုလှုံနေကြရတဲ့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေဟာ ရာသီဥတု အအေးဒဏ်ကြောင့် မကျန်းမမာသူတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် စားနပ် ရိက္ခာ ဆေးဝါးအပြင် စောင်း အနွေအထည်တွေလည်း အရေးပေါ်လိုနေတယ်လို့ အကူအညီ ပေးသူ တွေက ပြောနေကြပါတယ်။
လွိုင်ကော်မြို့မှာ စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကြား တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်
လှိုငျကျောမွို့မှာ စဈကောငျစီတပျနဲ့ ပွညျသူ့ကာကှယျရေးအဖှဲ့ကွား တိုကျပှဲတှပွေငျးထနျ
ကယားပွညျနယျ လှိုငျကျောမွို့ ဒေါဥခူရပျကှကျမှာ စဈကောငျစီတပျနဲ့ ပွညျသူ့ကာကှယျရေးအဖှဲ့ တှကွေား ဒီနေ့ ဖဖေျောဝါရီ ၄ ရကျမှာ တိုကျပှဲတှပွေငျးထနျခဲ့ပါတယျ။ စဈပှဲတှကွေောငျ့ လှိုငျကျော မွို့ကနေ ဘေးလှတျရာသှားခဲ့ကွသူတခြို့ နရေပျပွနျလာကွပမေဲ့ ဘေးအန်တရာယျထပျရှိလာရငျ ပွေးဖို့ အသငျ့ပွငျထားကွတယျလို့ ဒသေခံတှကေပွောပါတယျ။ ဒီးမော့ဆိုမွို့နယျဘကျမှာလညျး ကြေးရှာတှေ ရှိရာဘကျကို စဈတပျက လကျနကျကွီးတှနေဲ့ ခွောကျလှနျ့ ပဈခတျနတောလို့ ဒသေခံတှကေ ပွောပါတယျ။ ခုလို ကယားပွညျနယျဘကျမှာဖွဈနတေဲ့ အခွအေနအေကွောငျး ရနျကုနျကလာတဲ့ သတငျးကို မခှာညိုက တငျပွပေးထားပါတယျ။
စဈကောငျစီတပျနဲ့ ဒသေခံပွညျသူ့ကာကှယျရေးတပျတှကွေား အပွနျအလှနျ ပဈခတျတိုကျခိုကျမှု ရှိနတေဲ့ ကယားပွညျနယျ၊ လှိုငျကျောမွို့က ဒေါဥခူအကဉျြးထောငျဘကျမှာ ဒီကနေ့ သောကွာနေ့ မှနျလှဲပိုငျး ၂ နာရီလောကျကလညျး တိုကျပှဲတှေ ပွငျးထနျခဲ့ပါတယျ။ လကျနကျကွီးသံ စကျသနေတျသံ တှေ ပွငျးပွငျးထနျထနျ အသံကွားနရေတယျလို့ လှိုငျကျောမွို့ခံ သံဃာတပါးက မိနျ့ကွားပါတယျ။
“ဒေါဥခူဆိုတာ မွို့လယျခေါငျနဲ့ မဝေးဘူးလေ။ ဒေါဥခူထောငျဘကျမှာ အကဉျြးထောငျဘကျမှာ တိုကျပှဲ ဖွဈနတေယျ အခုလောလောဆယျ။ လကျနကျကွီးသံတှရေော လကျနကျငယျသံတှရေော လကျနကျကွီးသံကလှဲလို့ ဟိုမှာ တိုကျနကွေတယျလေ။ အပွနျအလှနျပဈနကွေပွီ။ တျောတျော ပွငျးထနျတယျ။ စကျသနေတျသံတှရေော လကျနကျငယျအသံတှရေော RPG သံတှရေော အဲ့ကွောငျ့ မို့လို့ (ဒသေခံတှေ) အမြားကွီးမပွနျလာသေးဘူး။ နညျးနညျးပဲ ပွနျလာသေးတယျ။ ဒီမနကျခငျးဆို ဦးဇငျးသှားတော့ သူတို့ တခြို့ကတြော့လညျး ပစ်စညျးတှေ ရသလောကျသယျ ထှကျနတေယျ။ ပွနျ လာတယျဆိုတာ ဒီဒေါဥခူကှကျ (၁) မှာပဲ ပွနျလာမယျ။ အဲ့ဒီထောငျဘကျနားနီးတဲ့လူ မပွနျလာဘူး။”
ဇနျနဝါရီလက လှိုငျကျောမွို့မှာဖွဈတဲ့ ဖွဈတဲ့တိုကျပှဲတှအေတှငျး စဈတပျက လကွေောငျး တိုကျခိုကျမှု တှပေါ လုပျခဲ့တဲ့အတှကျ တမွို့လုံးနီးပါး ဘေးလှတျရာတှကေို ထှကျပွေးခဲ့ကွပါတယျ။ အခုတော့ မွို့ တခြို့နရောတှမှော တိုကျပှဲတညျငွိမျစပွုလာတာကွောငျ့ ဒသေခံတခြို့ကတော့ နရေပျပွနျ လာခဲ့ကွ ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ လုံခွုံရေး စိတျမခရြတဲ့အတှကျ လိုအပျရငျ ဘေးလှတျရာကို ပွေးရှောငျဖို့ အဆငျသငျ့ ပွငျဆငျထားကွတယျလို့ မွို့ခံ သင်ျဃာက မိနျ့ပါတယျ။
“လကျနကျကွီးသံတှေ RPG သံတှေ အဲ့လောကျ နောကျ လကျနကျငယျသံတှေ အဲ့ဒါတော့ ကွား တယျ။ မွို့အစှနျ့စှနျ့မှာဆိုရငျ မနကျပိုငျး သို့မဟုတျရငျ ညနခေငျးအဲ့လိုမြိုးတော့ ကွားနတေယျ။ ခပျ မြားမြားနတေို့ငျးလိုလိုပါပဲ။ လှိုငျကျောမွို့ပျေါဆိုရငျ ၁၀၀ မှာ ၃၅ ရာခိုငျနှုနျးလောကျတော့ ပွနျရောကျ နတေယျ။ စိတျခလြကျခတြော့ နလေို့မရဘူး။ အကုနျလုံး ပွနျလာတဲ့လူဆိုရငျ အကုနျလုံးအဆငျ့သငျ့ပဲ။ ဆိုးတဲ့ကာလဖွဈရငျ ပွနျပွေးဖို့ အဆငျသငျ့လုပျထားကွတာတှေ မြားတယျ။ နောကျညနခေငျးဆို မထှကျတော့ဘူးဆိုကတညျးက သူတို့က အရငျစိတျနဲ့ လှတျလှတျလပျလပျ နလေို့မရဘူးဆိုတာလညျး သူတို့သိနတော။”
ခုလိုလှိုငျကျောမွို့မှာ လုံခွုံရေး မတညျငွိမျတဲ့ အခွအေနဖွေဈနသေလို ဒီးမော့ဆိုမွို့နယျထဲမှာလညျး လကျနကျကွီး လကျနကျငယျတှနေဲ့ စဈတပျဘကျက ခွိမျးခွောကျပဈခတျနတေယျလို့ ဒသေခံတှကေ ပွောပါတယျ။ လှိုငျကျောနဲ့ ဒီးမော့ဆိုမွို့ကွားက တိုကျပှဲတှပွေငျးထနျခဲ့တဲ့ ၆ မိုငျ စံပွကြေးရှာ၊ ဟိုဖိတျကြေးရှာတဝိုကျ ဒီနေ့ မနကျအစောပိုငျးက စဈတပျဘကျက လကျနကျကွီးတှနေဲ့ လှမျးပဈ ခတျနတောလို့ ဒသေခံက ပွောပါတယျ။
“အခွအေနကေတော့ နညျးနညျးဆိုးနတေဲ့ သဘောရှိတယျဗြ။ ဒါပမေယျ့ တိုကျပှဲရယျလို့တော့ မဟုတျ ဘူးပေါ့။ သူက လကျနကျကွီးတှေ ရမျးတမျးပွီးတော့ အဲ့လိုမြိုး ပဈခတျလာတာမြိုး ရှိတယျဗြ ဟုတျ။ ဒီးမော့ဆိုဖကျမှာက အဓိက အပဈခံရတဲ့နရော တျောတျောမြားမြား ဒီ ၆ မိုငျရယျ ဟိုဖိတျတကြော ပေ့ါနျော။ တိုကျပှဲဖွဈပွီးတဲ့ နရောတှပေေါ့နျော။ အခုလညျး မီးလောငျနတေယျပေ့ါနျော အဲဒီဘကျမှာ။ တိုကျပှဲတော့ မဖွဈဘူးဗြ။ ဒါပမေယျ့တော့ လကျနကျကွီးတှနေဲ့ အဆကျမပွတျ ထုနတေယျပေ့ါနျော။ စောတုနျးကလညျး ရဟကျယာဉျတစီးဝဲနတေယျပေါ့နျော။ အခုထိတောငျမှ ဝဲနတေုနျးပဲဗြ။”
ကယားပွညျနယျမှာဖွဈတဲ့ တိုကျပှဲတှမှော စဈကောငျစီက လကွေောငျးသုံး ဗုံးကွဲတိုကျခိုကျမှုတှေ ရှိတာကွောငျ့ ဒသေခံတှကေ။ စဈရဟကျယာဉျတှေ အမွဲတမျး ပြံသနျးတာကိုတှနေ့ရေပွီး ဗုံးကွဲ တိုကျခိုကျခံရမှာကို စိုးရိမျထိတျလနျ့နကွေတာပါ။ ဟိုဖိတျကြေးရှာဘကျမှာ စဈကောငျစီ တပျဖှဲ့တှေ တပျစှဲထားတာဖွဈပါတယျ။ အဲဒီရှာဘကျမှာ ဒီနေ့ တိုကျပှဲတှေ မရှိပမေဲ့ စဈတပျက ရှာဖှေ ရှငျးလငျးနတေယျလို့ ဒသေခံက ပွောပွပါတယျ။
“ထိတှတေို့ကျပှဲ အပွနျအလှနျပဈခတျမှုတော့ မရှိဘူးပေါ့နျော။ ရှာထဲမှာ သူတို့က စခနျးခပြွီးတော့ နနေတောတှရှေိတယျ။ အဲ့လိုမြိုး စခနျးခနြနေတောကိုမှ သူတို့က …. လူနအေိမျတခြို့ တှကေို လိုကျမှပွေီးတော့ ဖကျြစီးတာတှေ၊ ဝငျမှတောတှေ… နောကျပွီးတော့ ပွညျသူတှပေိုငျတဲ့ ကြှဲ နှား တိရိစ်ဆာနျတှေ၊ အိမျသုံး၊ အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျတှလေညျး သူတို့က သတျဖွတျပွီး စားသောကျနတောမြိုးတှေ တှရေ့တာပေါ့နျော။”
လကျနကျကွီး ပဈခတျခံနရေတဲ့ နရောတဝိုကျမှာ ဒသေခံတှေ မရှိကွဘဲ အရငျကတညျးက ဘေးလှတျ ရာကို ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနကွေပါတယျ။ ဒသေအခွအေနေ တညျငွိမျရငျ ဒသေခံတှေ ပွနျလာကွပွီး အခွအေနဆေိုးရငျ ပွနျပွေးနကွေရတာပါ။ ကယားပွညျနယျထဲက မွို့နယျတျောတျော မြားမြားမှာ ဖွဈနတေဲ့ တိုကျပှဲတှကွေောငျ့ စဈဘေးဒုက်ခသညျတှေ သိနျးနဲ့ခြီရှိနပေါတယျ။ ဘေးလှတျရာ ပတျဝနျး ကငျြ မွို့နယျ ကြေးရှာနဲ့ တောတောငျတှထေဲမှာ ခိုလှုံနကွေရတဲ့ စဈပွေးဒုက်ခသညျတှဟော ရာသီဥတု အအေးဒဏျကွောငျ့ မကနျြးမမာသူတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။ စဈဘေးဒုက်ခသညျတှအေတှကျ စားနပျ ရိက်ခာ ဆေးဝါးအပွငျ စောငျး အနှအေထညျတှလေညျး အရေးပျေါလိုနတေယျလို့ အကူအညီ ပေးသူ တှကေ ပွောနကွေပါတယျ။
စစ်တပ်နဲ့လက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံး အရပ်သားတွေကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ OCHA တိုက်တွန်း
လေကြောင်းကအတိုက်ခံရတဲ့ လွှိုင်ကော် သံဃာတော်များပါ ဘေးလွတ်ရာတိမ်းရှောင်